> Magan galyo > Daljooga > hoydajinta
Shuruudaha hoysiintu waxay ku xirantahay xaaladda qofka ay khuseyso ku suganyahay.
Marka aad weydiisaneyso magangalyo waxa lagu geynayaa xarunta diiwaangelinta ee markaas lagugu cayimay
Haddii wakhtiga laga shaqeynayo arjigaagu uu dheeraado, waxa laguu bedelayaa kantoonada mid uun.
Haddii arjigaaga laajinimo aad ka dhiibto garoonka dayuuradaha gudahiisa waxad markaas joogeysaa garoonka gudahiisa, ma na ka bixikartid qaybta taransidka.
Inta lagu gudajiro shaqada arjigaaga magangalyo
Dadaka magangalyo doonka waxay badanaa ba lagu haynayaa hoy la isugu geyo laajiyiinta oo dhan. Dadka siijoogitaankoodu sii dheeraado, quwaas oo leh dhaqaale ama mihnad ama ehel ku leh dalka, waa loo ogolyahay in ay ku noolaadaan hoy u khaas ah.
Ka dib marka arjiga magangalyo la soo diido
Dadka hela jawaab arjigooda lagu soo diidayo oo kama dambeyn ah, ma loo bedelayo kantoon. Inta lagu jiro xaaladaas, waa in ay ka baxaan xarunta diiwaangelinta ka na baxaan Swiiska. Haddii ayan laheyn awood dhaqaale ama warqado ay kaga baxaan Swiiska, waxay hoy u doonan karaan xeryo ama heyado laajiyiinta siiya kaalmo degdeg ah.
Dadka codsigoogo la soo diido waa in ay ka baxaan hoyga la dejiyay ama guriga ay deganyihiin oo ay kaga baxaan wakhti loo cayimay. Haddii ayan ka bixikarin wadanka, waxaa oo u furan in ay iska xaaririyaan xarumaha ku deeqa kaalmo deg deg ah.
Kuwa loo aqoonsaday qaxooti
Magangalyo donka la aqoonsaday waxay xaq u leeyihiin in ay degaan guri u gaar ah.
Magangalyo doonnada waxaa lagu qoraa kaantoon halkaas ayey na ku sugnaanayaan.
Waxa jira ogolaansho sharciyeysan oo ku meelgaar ah oo laga aqoonsanyahay kaantoonka magangaya doonku deganyahay. Laajiyiinta sida sharciyeysan loogu qoray kaantoon waxay xaq u leeyihiin in ay doortaan degmada ama tuulada ay degayaan isla kaantoonkaas gudahiisa. Hadaba xaq uma laha in ay ka bedeshaan kaantoonka ay deganyihiin, haddii ayan dooneyn in qoyska oo dhammi meel ku wada noolaadaan.
Xafiiska Federaalka ee qaabilsan laajiyiinta (ODM) ayaa goaamin kara in laaji uu iska bedelo kaantoonka uu deganyahay.
Marka hore, laajiyiinta la aqoonsaday waxay helayaan warqadda deganaashaha ee loo yaqaan B (permis B). Warqaddani waxay ka sharciyeysantahay kaantoonka laajiyiintu deganaayeen intii laga baarayay arjigoonda.Laajiyiintu waxay xaq u leeyihiin in ay doortaan halka ay kaga noolaanayaan kaantoonka gudhiisa. Haddii ay doonayaan in ay ka bedeshaan kaantoonka ay deganyihiin waa in ay arji u qortaan xafiiska arintaas qaabilsan ee ku yaal kaantoonka ay doonayaan. Shan sano ka dib marki la aqoonsaday, laajiyiintu waxay helayaan aqoonsiga rasmiga ah ee dal ku jooga oo la yiraahdo sharciga rasmiga ah ee C ( permis C). Markan waxay laajiyiintu si xor ah u doorankaraan kaantoonka ay doonaan.